10 Tsena fivarotana sakafo tsara indrindra eran'izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Tsena fivarotana sakafo tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 31/01/2021)
Afaka mitety an'izao tontolo izao ianao, fa hiaina ny tsara indrindra amin'ny toerana rehetra ianao amin'ny alàlan'ny sakafo. Our 10 tsena sakafo tsara indrindra eran'izao tontolo izao no hilaza aminao ny tsiambaratelo rehetra momba ny olony, kolontsaina, tantara, ary ny fomba fampifangaroana azy, isaky ny manaikitra amin'ny paty, voankazo kintana, sy saosisy. Ankoatry ny, raha tsy ampy izany, afaka manontany ireo fivarotana sakafo foana ianao’ tompona ho an'ny toro-hevitry ny atiny, avy any Eropa ka hatrany Sina.
1. Cours Saleya Sakafo Sakafo any Nice
Ny tsena ivelany lehibe indrindra any Nice dia ny tsenan-tsakafo sy ny voninkazo ao amin'ny Cours Saleya any Old Nice. Eto ianao no hahita mofomamy vaovao, fromazy, anana entina miverina ho fahatsiarovana, sy ny sakafo matsiro eo an-toerana.
Tsy hionona amin'ny sakafo frantsay tsara indrindra ihany ianao, fa hiaina izany rehetra izany amin'ny rivotra madio ianao. Ireo voninkazo mijoro eo akaiky eo dia mamita ny toerana misy a traikefa nahandro mahavariana.
Ny tsenan-tsakafo mahavariana an'i Nice dia miandry anao isa-maraina, afa-tsy Alatsinainy.
2. Tsena fivarotana sakafo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Tsenan'i Borough any London
I London dia malaza amin'ny tsena an-dalambe mahagaga, faritra tsara tarehy, ary ny arabe misy vibe tsy manam-paharoa. Tsy misy na inona na inona afaka mifaninana amin'ny rivo-piainana manokana sy velona eo amin'ny tsenan-tsakafo any Londres, ary ny tsenan-tsakafo Borough no tsara indrindra.
Eto no ahitanao ny sakafo an-dalambe tsara indrindra: Sakafo fromazy kappacasein, mofo Mialoha ny mofomamy sy mofomamy, Rtoa. Pie King's Pork, ary Greedy Goat's gilasy ho an'ny tsindrin-tsakafo. Ity tsena mahavariana ity dia mandray mpitsidika isan'andro, ho an'ny farany 1,000 taona, ary dia iray amin'ireo mari-toerana malaza any Londres.
3. Tsena fivarotana sakafo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Tsenan'i Sanyuanli any Beijing
Voankazo hafahafa sy sakafo tsy fahita firy, Sanyuanli dia iray amin'ireo tsiambaratelo miafina ao Beijing. Ny tsenan-tsakafo no ahitan'ny mpahandro sy tandrefana any an-toerana mividy voankazo kintana sy sakafo vaovao, ary ahitra nafarana
Noho izany, raha tianao ny manao fanandramana ao an-dakozia, mila mahazo aingam-panahy, izany no toerana. Ao amin'ny tsenan-tsakafo Sanyuanli dia afaka mahita zavatra rehetra ianao, amin'ny vidin'ny ambongadiny, fa mandoa vola fotsiny. Ny tsenan-tsakafo Sanyuanli dia ao amin'ny Distrikan'i Chaoyang ary misokatra isan'andro.
4. Tsenan-tsakafo tsara indrindra any Munich: The Viktualienmarkt
Raha vorona aloha ianao, avy eo amin'ny 6 ho raisina amin'ny fofona kafe sy fofona pretzels vaovao ianao. Ny fihinanam-pastry an'i Karnoll dia iray amin'ireo toeram-pisakafoanana voalohany misokatra eo amin'ny tsenan-tsakafo Viktualienmarkt any Berlin.
Ho fanampin'ny specialty an'ity Munich ity, ao Viktualienmarkt dia hanandrana ny saosisy fotsy tsara tarehy sy lovia Bavarian hafa ianao. Ao amin'ny kianja eo anelanelan'ny Frauenstrasse sy Heiliggeistkirche, ho hitanao ny tsenan'ny tantsaha sy ny toeram-pivorian'ny Muncheners.
5. Tsena fivarotana sakafo tsara indrindra any Shina: Tsenan-tsena any Kowloon City any Hong Kong
Miaraka amin'ny isa miavaka amin'ny 581 tsoavaly, ny tsenan-tsakafo Kowloon no tsena lehibe indrindra any Hong Kong. Ho hitanao misokatra isan'andro ity tsena mahavariana ity 6 AM 8 PM, ary ara-drariny 14 minitra amin'ny alàlan'ny mandeha an-tongotra avy eo amin'ny gara Lok Fu. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana ny tsenan'i Kowloon dia amin'ny alina rehefa misy jiro, ary manomboka ny fetin'ny sakafo.
Ny tsenan'i Kowloon City Wet dia manome ny vokatra vaovao tsara indrindra, manomboka amin'ny hazan-dranomasina ka hatramin'ny legioma. Goavana tokoa ity tsena ity, fa mila andro iray manontolo ianao handrakofana ny rehetra 3 TANTARA, manomboka amin'ny sakafo maraina any Hong-Kong ka hatramin'ny atoandro sy hariva. Anisan'izany ny fanandramana sakafo Thai satria ny mponina Thai eto no lehibe indrindra.
Ny tendronay tsara indrindra ho an'ny tsenan'i Kowloon dia ny fanarahana ny vahoaka. Noho izany, ny trano fivarotana sy fivarotana malaza indrindra manome ny vokatra farany, misaotra ny fihenan'ny vokatra avo lenta.
6. Ny tsenan-tsakafo Quadrilatero any Bologna Italia
Miaraka amin'ny fofon-diloilo menaka balsama, karazana paty, ary mortadella, Ny tsenan-tsakafo Quadrilatero dia lanitra fandrahoan-tsakafo tanteraka. Manaiky izany ianao italiana nahandro dia iray amin'ireo tsara indrindra eto an-tany, ary ny sakafo an-dalambe no lohalaharana amin'ny tabilao sakafo manerantany.
Raha mbola manana efitrano ianao, avy eo ny tagliere an'i Romanzo an'ny fanapahana mangatsiaka dia ho fety amin'ny fahatsapana. Ho hitanao eo akaiky eo io tsenan'ny sakafo masina io Piazza Maggiore, sokafy ny Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy.
Venise mankany Bologna miaraka amina lamasinina
Florence mankany Bologna miaraka amina lamasinina
Roma mankany Bologna miaraka amina lamasinina
Milan mankany Bologna miaraka amina lamasinina
7. KadeWe Tsenan'ny sakafo any Berlin
Ny tsenan-tsakafo KadeWe dia iray amin'ireo tsena fisakafoanana mihaja indrindra eto aminay 10 tsenan-tsakafo tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Ity tsena sakafo Alemanina ity dia miorina amin'ny iray amin'ireo magazay lehibe ao Berlin ary miparitaka amin'ny gorodona iray manontolo.
Noho izany, na dia efitrano fisakafoanana aza, hahita sakafo tsy manam-paharoa mifantina ao amin'ny tsenan-tsakafo KadeWe ianao. Ohatra, raha maniry fromazy ianao, avy eo 1300 fromazy samihafa amin'ny safidinao. na, tsindrin-tsakafo mahafinaritra sy fitrandrahana nentim-paharazana, toy ny tsenan'ny sakafo KadeWe, dia ho an'ny sakafo tsara indrindra sy matsiro indrindra.
8. Tsenan'ny sakafo any Bastille any Paris
Ny fisakafoanana amin'ny tsenan-tsakafo lehibe indrindra any Paris dia zavatra tokony hataon'ny olona tia sakafo rehetra. Ny tsena goavambe dia antsoina amin'ny anaran'ny Revolution lehibe. Ka hanandrana amin'ny masonao sy ao an-tsainao izay rehetra atolotry ny Paris ianao.
Roa indroa isan-kerinandro no hitsena anao amin'ny sandrinao malalaka sy ny chic frantsay. Hifangaro amin'ny olona eo an-toerana ianao ary hiditra amin'ny pastry frantsay, fromazy vaovao, ary saosisy mahafinaritra. Mandehana mankany Boulevard Richard Lenoir, ary ho hitanao ny isan'ny fivarotana sakafo mahavariana, fofona manitr'ireo, sy ny loko.
9. Tsenan'ny trondro Rialto any Venise
Eo amoron'ny Canal Grand, ho hitanao ny tsena sakafo antitra indrindra any Venise, Tsenan'ny trondro Rialto. Nomena anarana taorian'ny tetezana afovoany any Venise, ny tsenan'ny trondro Rialto dia manome karazan-dranomasina mahavariana sy mifangaro akaiky amin'ny Venetians.
Misokatra ny tsena Rialto 8 mandra-pisakafoanana atoandro, Talata ka hatramin'ny sabotsy. Ho hitanao mifanila ny Pescheria sy Erberia, amin'izay ianao afaka mahazo izay ilainao amin'ny sakafo atoandro, manomboka amin'ny legioma vaovao ka hatramin'ny scallops mahitsy avy amin'ny ranomasina.
10. Tsenan'ny sakafo Testaccio any Roma
Andro Italiana mando na faran'ny herinandro ririnina, ny tsenan-tsakafo ara-tsakafo Testaccio no toerana hangout tsara indrindra any Roma. Ity tsenan-tsakafo mahavariana ity dia miorina eo amin'ny toerana arkeolojika romana, noho izany ianao dia hanaikitra amin'ny lovia paty vaovao voadidy tamin'ny tantara taloha.
Ny tsenan'i Testaccio dia antsoina hoe Nuovo Mercato hatramin'ny nifindrany tamin'ny toerana vaovao misy azy eo amin'ny manodidina an'i Testaccio 80 taona maro lasa izay. Na izany aza, mbola ho hitanao ireo boaty sakafo taloha eny an-dalambe, Manaikitra sy sandwich any Vali ao anaty boaty 90, Ny pizza vaovao an'i Casa Manco ao anaty boaty 22, sy ny maro hafa.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina fitsangatsanganana an-tsakafo tsy hay hadinoina erak'izao tontolo izao amin'ny lamasinina.
Te-hapetraka ao amin'ny tranonkalanao ve ny lahatsoratray hoe "10 Fivarotana sakafo tsara indrindra eran'izao tontolo izao"? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-markets-world%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny zh-CN ho / fr na / de sy fiteny maro hafa.
BestFoodMarketsInChina BestFoodMarketsInEurope BestFoodMarketsInTheWorld BestNightMarketsChina BestPlacesToEatEurope mari-tsakafo foodtravel